Vaccination mot influensa Jönköpings län - somaliska - 1177
Skydda dig mot influensa - somaliska
Iska ilaali hargabka
Skydda dig mot influensa - somaliskaThe content concerns Jönköpings län
Hargabku waa cudur fayras ah oo la is qabadsiiyo oo kugu keena qufac iyo qandho badan.
Dadka badankood waxay ku caafimaadaan hal ama labo todobaad. Laakiin dadka waayeelkaa ama dadka qaba cudurada joogtada ah sida wadna xanuun ama macaanka wuxuu ku noqon karaa halis hadii la qabadsiiyo.
Sida ugu wanaagsan ee aad uga hortagi karto hargabka waa inaad iska taalaashid intuunan kugu dhicin. Wuu kugu dhici karaa hargabku hadaad xataa iska taalsho, laakiin talaalka aad qaadatay ayaa kaaga dhigaya mid fudud oo halis ku gaadhsiin.
Talaalka hargabku waa kuu bilaash hadaad ka mid tahay dadka u nugul cudurka, sida hadaad tahay 65 jir ama aad uur leedahay.
Waxaad isku talaali kartaa xaruntaada caafimaad (vårdcentral). Waqtiga iyo meelaha tallaalka waxaad ka heli kartaa 1177.se/Jonkopings-lan
Hargabka iyo cudurka covid-19
Calaamadaha hargabku waxay u eegyihiin kuwa cudurka covid-19. Hadii aad qufacaysid ama aad qandho leedahay uma baahnid inaad iska talaasho hargabka. Taa badalkeeda la xidhiidh rugtaada caafimaad si lagaaga baadho cuddurka covid-19.
Tallaalka hargabku kaama caawinaayo cuddurkan safmarkaa ee covid-19. Laakiin hadii uu kugu dhaco hargab isla markaana kuu raaco cuddurkan safmarkaa ee covid-19 waxaad u xanuusan kartaa si halis ah. Sanadkan hadaad ka tirsantahay dadka u nugul ama halista u ah hargabka, ama aad gaadhay 65 sano ama aad uur leedahay iska talaal hargabka bisha noofambar (november). Laga bilaabo diisamber (december) dadka kale baa iska talaali kara lacagta tallaalkuna waa 300 kr. Kaarka bilaashku ma quseeyo iyaga.
Ubaq naftaada oo iska talaal hargabka.